फेरि आयो ! “प्रमोद खरेल”को रुवाउने गित “धोका” (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं -गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा एलिसा मगरको आधुनिक गीत ‘धोका’ सार्बजनिक भएको छ । गीतमा एलिसा मगरकै शब्द रहेका छन । गीतका संगीतकार हरि थापा हुन् ।
सामना म्युजिक क्रिएसनले बजार ब्यबस्थापन गरेको उक्त भिडियोमा पछिल्लो समयमा चर्चा हुन थालेको छ । म्युजिक भिडियोमा बुद्धबीर थापा, बिरज बास्कोटा र उषा सुवेदीको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
निर्देशक गौतम शेर्पाको निर्देशन रहेको उक्त भिडियोलाई तिलक रिजालको छायांकन रहेको छ । भिडियोलाई अभिनाश डिसीले सम्पादन गरेका छन ।
भिडियोलाई रेलिमाई टिभी नामक युटुब च्यानल बाट सार्बजनिक गरिएको छ । भिडियोको छायांकन इलाम र झापा आसपासमा गरिएको हो । भिडियो ।
किन देखिन्छन डरलाग्दा सपना (जानी राखौ)
मानिसहरू सपना देख्छन्, कहिले राम्रो र कहिले नराम्रो अर्थात् डरलाग्दो। डरलाग्दो सपना देखेपछि मानिस पसिना–पसिना भएर ब्युँझन्छन् पनि। तर, त्यस्ता डरलाग्दा अथवा नराम्रो सपना बिरामी हुने संकेत पनि हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्.। कहिलेकाहीँ नराम्रा सपना रोगको लक्षण देखिनुभन्दा धेरै अघि पनि देखिन सक्छ।
गत महिना अनुसन्धानकर्ताहरूले बाल्यकालमा नियमित नराम्रा सपना देख्ने व्यक्तिमा पछि गएर मानसिक समस्या देखिने बताएका थिए। ६८०० बालबालिकाबीच गरिएको उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन ‘स्लीप’ नामक जर्नलमा प्रकाशित गरिएको थियो।
अध्ययनमा दुईदेखि सात वर्षका बच्चाले हप्तामा दुई या तीनपटकसम्म नराम्रा सपना देख्ने गरेको पाइएको थियो। ती बालबालिकाले किशोर उमेर पुग्दासम्म कुनै आवाज सुनेजस्तो भ्रम सिर्जना हुने समस्या देखापर्ने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्।
बारम्बारको नराम्रा सपनाले बालबालिका भावनात्मक चोट (दुव्र्यवहार, बदमासीलगायत) को सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने अनुसन्धानकर्ताको भनाई छ। उनीहरुका अनुसार नराम्रा सपनाले मानिसभित्र रहेका शारीरिक समस्याको संकेत गर्छ। मानिसले निद्राको र्यापिड आइ मुभमेन्ट (रेम) को चरणमा मात्र सपना देख्छन्, रेम हरेक रात चार या पाँच चरणमा हुन्छ।
यसका साथै थुप्रै मेडिकल समस्याका कारण निद्रा विथोलिन्छ, ‘यसको अर्थ हुन्छ, तपाई रेमको अवधिमा ब्युँझनुहुन्छ र त्यस्ता सपना सम्झनुहुन्छ।’ क्याम्ब्रिजको पापवर्थ हस्पिटालका निद्रा अनुसन्धानकर्ता एवम् कार्डियोलोजिस्ट डा.निकोलस ओस्क्रोफ्टले भने।
यस्तै, अनिद्राको समस्या भएका मानिसले पनि नराम्रा सपना देख्छन्, यस्तो अवस्थामा केही क्षणका लागि श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या आउन सक्छ। स्वास्थ्य खबरपत्रिका नियमित नराम्रा सपना मुटुको समस्यासंग पनि गाँसिएको हुन्छ।
अन्य मानिसभन्दा नराम्रा सपना देख्ने मानिसमा मुटुको चाल अनियमित हुने समस्या तीन गुणा बढी हुन्छ भने छाति दुख्ने समस्या सात गुणा बढी हुन्छ। मुटुको समस्या आउँदा फोक्सोमा पानी जम्ने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा श्वासप्रश्वासमा समस्या आउछ।
गहिरो निद्रामा परेका बेला अरू सबै मांशपेशीले काम नगरेपनि फोक्सोमा पानी जम्दा श्वासप्रश्वासमा भाग लिने मांशपेशीलाई भने असर पार्न सक्छ। यहीकारण मानिस गहिरो निद्राबाट ब्युँझन सक्छ। र मानिसले खराब सपना सम्झन्छ। यसका साथै मिर्गौलामा संक्रमण, रुघाखोकीजस्ता संक्रमण भएका मानिसले पनि नराम्रा सपना देख्ने अनुसन्धानकर्ताको भनाई छ।
यस्तै, अति खराब सपना देख्नु पार्किन्सन रोगको प्रारम्भिक संकेत भएको न्युरोलोजिष्ट डा. रोबर्ट ब्रेनरको भनाई छ। माइग्रेनले पनि नराम्रा सपना देखाउछ। धेरैजसो महिलाले रजस्वला वरपरको समयमा अनेक थरि सपना देख्नछन्।